प्रदेश नम्बर ३ मा कहाँ कहाँ हुँदैछ चुनाव ?
समाचार प्रदेश नम्बर ३ मा कहाँ कहाँ हुँदैछ चुनाव ?
Ujyaalo आइतवार, मंसिर १०, २०७४ १८:०६:००
काठमाडौं, मंसिर १० – प्रदेश नम्बर तीनका छ वटा जिल्लामा पहिलो चरणमा चुनाव हुँदैछ । प्रदेश तीनका १३ जिल्लामा ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
यीमध्ये नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो चरणमा आइतबार चुनाव हुँदैछ । यो प्रदेशमा जम्मा ३० लाख ७४ हजार ३ सय ८४ मतदाता रहेका छन् । यीमध्ये पहिलो चरणमा १० लाख १ हजार ४० मतदाता छन् । २० लाख ७३ हजार ३ सय ८४ जना मतदाता दोश्रो चरणमा चुनाव हुने क्षेत्रका हुन् ।
दोलखामा १५ जना उम्मेदवार र १ लाख ४७ हजार ९ सय २३ मतदाता र १२ जना उम्मेदवार रहेको रामेछापमा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५९ जना मतदाता रहेका छन् ।
धादिङका १ सय ९ मतदान स्थलमा २ सय ७५ मतदान केन्द्र, नुवाकोटका १ सय २९ मतदानस्थलमा २ सय ६० मतदान केन्द्र, सिन्धुपाल्चोकका १ सय ४४ मतदानस्थलमा २ सय ८५ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।